अमेरिकामा लकडाउन खोल्न ट्रम्पले ल्याए नयाँ निर्देशिका ! «
अमेरिकामा लकडाउन खोल्न ट्रम्पले ल्याए नयाँ निर्देशिका !
Published : 17 April, 2020 7:35 am
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहे पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आउँदो महिनादेखि अमेरिकामा लकडाउन हटाउन नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् । राज्यका गभर्नरहरुका लागि एक निर्देशिका जारी गर्दै ट्रम्पले तीन चरणमा लकडाउन खुला गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । १८ बुँदे निर्देशिकामा एउटा चरण कम्तीमा १४ दिनको हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ६ लाख ५४ हजार तीन सय १ जना संक्रमित भइसकेका छन् भने ३२ हजार एक सय ८६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले केही राज्यहरुमा यसै महिनादेखि लकडाउन हटाउन सक्ने बताएका छन् । दैनिक ब्रिफिङका क्रममा बिहीबार राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन् ‘हाम्रो युद्धको अर्को मोर्चामा अमेरिका फेरि खुला हुनेछ ।’
ट्रम्पले अगाडि भनेका छन् ‘अमेरिका खुला हुन चाहन्छ र अमेरिकन खुला हुन चाहन्छन्, देश बन्द राख्नु दिगो समाधान होइन ।’ उनले लामो समयको लकडाउनले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या ल्याउने सम्भावना देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार लकडाउनले लागूऔषध दुव्र्यसनी, मदिरा प्रयोग, मुटुका बिरामी र अरु शारीरिक र मानसिक समस्या बढ्न थालेको छ ।
ट्रम्पले स्वस्थ नागरिकले निश्चित नियम पालना गरेर काममा फर्किने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै स्वस्थ व्यक्तिले सामाजिक दूरी कायमै राखेर काममा सहभागी हुने र अस्वस्थ भए घरमै राख्ने ट्रम्पको रणनीति छ । लकडाउन खुला गर्नुलाई ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ‘समयको सावधानी कदम’ भनेका छन् ।